PROF AXMED SAMATAR MA XISBIGA KULMIYE AYUU KU BIIRAY, MISE KULMIYAA KU BIIRAY? | Berberatoday.com
PROF AXMED SAMATAR MA XISBIGA KULMIYE AYUU KU BIIRAY, MISE KULMIYAA KU BIIRAY?
June 14, 2016 - Written by berberatoday berberatoday
Sooyaalka argtiyaha siyasadeed Prof Axmed Ismaaciil Samatar ma ah kuwa ku bilaabmaya intii uu shaaciyey in uu quus ka joogo aragtidii uu mudada ay jirtay Somaliland ee dheer uu difaaci jiray ee “Wada jirka Soomaaliya” oo ay qayb ahaan isaga xagiisa Somaliland ka mid ahayd wadajirkaas oo difaaceeda sidoo kalena weerar ku hayey argtida uu maanta muujiyey in uu difaacayo ee jiritaanka Somaliland.
Sidoo kalena shaacinta uu maanta (Salaasa 14. Juun 2016) shaaciyey in uu ku biiray xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye, waxa ay dib daaha uga rogaysaa in aanu Prof Axmed Ismaaciil Samatar ku cusbayn argtida xisbinmo iyo in uu ku biiro xisbi doonaya in uu isbadal dhaliyo, waxaana sooyaal ahaan mudan in la xuso in Pro Axmed Ismaaciil Samatar uu hogaamiye xisbi hore u soo noqday oo uu aas-aasayasayaal xisbi ka mid ahaa, haba dhicisooba aragtidii xisbigaasiye.
Xisbiga uu hore u soo noqday hogaankiisa oo si cad lid ugu ahaa jiritaanka Somaliland ayaa waxa uu ahaa xisbigii uu mar kali ah ka dhex-xuubsiibtay markii uu soo taabtay xaqiiqa siyaasadeed ee Soomaaliya, waa xisbigii Hiil Qaran oo u taagnaa ka hortaga Somaliland aqoonsigeeda iyo sidoo kale “Wada jirka Soomaaliya difaceeda”
Xisbiga waxa lagaga dhawaaqay magaalada London bishii Feebawari shir socday laba maalmood oo ku beegnaa 25-26kii bishaas sanadkii 2011-kii. Waa ku dhawaad toban sano ka dib xiligii xisbiga Kulmiye lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa oo ah sanadkii 2002-dii.
Tanina wax ay muujinaysaa in ku hamiga aragti xisbi uu ku horeeyey gudoomiyaha xsibiga Kulmiye, Gud. Muuse Biixi Cabdi, hase ahaatee haddana Prof. Axmed Ismaaciil Samatar kama madhna argtiyo uu si xoogan u aaminsan yahay in uu ku biiriyo Kulmiye.
Ka mid soo noqoshadaas xisbi siyaasi oo hore iyo meel marintii aragtidii uu hore u qabay waxa ay dabcan raad ku yeelanaysaa qabka uu u arko hanaan ka xisbiga uu ku cusub yahay ee Kulmiye iyo waxyaabaha uu in badan fagaarayaal badan ka sheegay in ay ka dhiman yihiin Somaliland, haba u dambayso tan maanta lagu qaabilay xubinimada Kulmiye ee magalada Boorame oo uu si cad u taabtay arimaha uu u arko in ka xisbi ahaan Kulmiye iyo guud ahaanba Somaliland ku liidato.
Arimahaas uu Prof. Axmed taabtay maanta waxa ay muujinayaan in aanu marnaba aaminsanayn in sida wax u socdaan Somaliland ayna saxsanayn, haddii ay tahay arimaha dibada, dhaqaalaha iyo ilaa arimaha heer deegaan. Muujinta dhaliisha u muuqata ama toosnita uu aaminsan yahay waxa ay si u yihiin kuwo meesha ka saaraya guulaha arimahas ee xisbiga Kulmiye iyo xukumadiisu ay inoo sheegaan ee ay sida adag u difaacaan marka ay xisbiyada mucaaridku ku dhaliilaan arimaha uu Prof. Axmed I. Samatar maanta uu mar kale kulan balaadhan oo Kulmiye dhexdiisa ah ka sheegay.
Prof Axmed Ismaaciil Samatar oo xiligii uu xisbiga ama aynu nidhaahnee hogaminayey ururkii Hiil Qaran mudadii 2011-ilaa 2013- waxa uu xisbigaaasi u dejiyey barnaamij uu ku daah-furay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota bishii May sanadkii 2012ka. Dabcan barnaamijkaas siyaasadeed ee uu Hiil Qaran u dajiyey waxa uu ahaa mid ku salaysan aragtidisii hore ee siyaasadeed.
Hase ahaatee ka mid soo noqoshada xisbi kale waxa ay keenaysa in Prof. Axmed Ismaaciil Samatar uu xambaarsan yahay aragtiyo hanaan xisbiyeed oo ula muuqda in xal u yihiin Somaliland, waxana tani keenaysaa in uu dib boodhka uga tumo barnaamijkii ka fashilmay ee uu Hiil Qaran u dajiyey oo balse ku dabaqan Somaliland iyo qadiyadeeda.
Waxaan wali inoo cadayn habka iyo hanaanka uu Prof. Samatar u meel marin karo aragtiyihisa isla xisbiga Kulmiye dhexdiisa. Hadalkii uu maanta jeediyey ee uu ku sharaxay sida uu Kulmiye kula shaqaynayo ma cadda marka si dhaba loo dhigo. Haddii aynu eegno erayada uu yidhi ee ugu dhow ee Kulmiye kula shaqayn karo waxa uu u dhigay oo uu yidhi:
“….. waxa kale oo aan doonayaa in aan iyana si weyn u caddeeyo in aan goostay talo ah taagtaydu ha iska yaraatee,…. in aan wax ku soo biiriyo umaddan Somaliland horu socodkeeda iyo dhismaheeda waxkhiga soo socda, anigoo galaya oo isticmaalaya ‘organisationka’ iyo dhismaha xisbiga Kulmiye….”
Prof. Axmed I. Samatar waxa uu sidaa ku sheegay khubadiisii kulankii lagu soo dhaweeyey xubinimadiisa Kulmiye ee maanta, hase ahaatee waxa uu sheegay in uu go’aankaa uu gaadhay kadib markii uu mudo laba sano darsayey dhamaan xisbiyada Somaliland.
Hase ahaatee nuxurka ku jira hadalka Prof. Axmed waxa uu yahay oo is weydiin leh waa maxay waxa uu ku soo biirinayo ummdda Somaliland isagoo ka duulaya xisbiga Kulmiye dhaxdiisa?
Isla kulanka lagu soo dhaweeyey ee Kulmiye ee magaalada Boorame waxa uu si cad u sheegay waxayaabo ay aragti ahaan kala duwan yihiin hogaanka Kulmiye iyo xukumadiisa, sida arimaha aynu kor ku soo sheeganay, oo Prof. Samatar in ay fashilan yihiin tilmaamayo.
Markaa maadaama sida muuqata uu Prof. Axmed ka aragti duwan yahay Kulmiye, isla markaana xambaarsan yahay aragtiyo uu mudo dheer qabay oo ah habka dal lagu dhisi karo, waxa is weydiin leh hogaanka Kulmiye iyo Prof. Samatar iyamaa aragti ahaan tanaasulay marka ay noqoto habka Somaliland lagu hagayo.
Gudoomiye Muuse Biixi oo aad u dareensan su’aasha ka dhalanaysa ku soo biirista Prof. Axmed ee Kulmiye, waxa uu inooga jawaabay su’aal sal u noqon karaysa aragtida uu xamabaarsan yahay Prof. Axmed, oo ah maadaama uu aragtiyo xoogan oo wax tilaamaya xambaarsan yahay waxa ay ku heshiiyeen ku soo biirista Kulmiye.
Waxaanu Gud. Muuse inoo sheegay in ay ku heshiiyeen qodobo iska macruuf ah oo aan la odhan karin waa wax cusub oo ay ku heshiiyeen, hase ahaatee waxa uu Gudoomiye Muuse inoo sheegay in aragtiyaha Prof. Axmed ee wax toosineed ayna ka diidanayn, haddana aanu inoo sheegin sida ay aragtiyahaa uga qaadanayaan iyo masabka uu ku lee yahay Kulmiye marka la eego miisaanka uu qof ahaan lee yahay.
Hase ahaatee waxa hubaal ah in Prof. Axmed Samatar wax ku biirin doono, biirintaasina waa ta uu asiibay wasiirka waxbarashada Somaliland. C/laahi Habne oo ha qofka kali ah ee sheegay in Kulmiye iyo Prof. Axmed wax isku biirsanayaan- waa eray muujinaya miisanka waxa uu ku biirin karo Prof. Samatar xisbiga Kulmiye, balse waxa Kulmiye ku biirinkaro Prof. Axmed oo xoog ugu dhagan aragiyihiisa, maadaama tiisu tahay ta ula saxan ee uu ku dhaliilsan yahayna ta Kulmiye hore u hayey siyaasiyan.
Halkan waxa wali inaga maqan qaabka aragtihaya Prof. Axmed Ismaciil Samatar qabo iyo kuwa uu Gudoomiye Muuse Biixi Cabdi isla fagaare isku mid ah ka sheegay sida ay isku waafajinayaan iyo kaalinta uu ku yeelanayo xukumada Kulmiye, ta hadda iyo tu dambe ba.
Waxase aynu ka dhursugaynaa in xubinimada Kulmiye ee Prof. Axmed loogu wanqali doono in uu xukumada xil sare ka qabto iyo in uu noqodo xil suge la iibiya aragtiyaha ‘cusub’ ee Kulmiye ku ololayndoono loolanka doorashada sanad 2017 ka.
Waxase aynu leenahay inta ka horaysa:
Kulmiye iyo Prof, Axmed Samatar iyamaa aragtidiisa meel maridoonaa?
Prof Axmed Samatar ma Xisbiga Kulmiye ayuu ku biiray, mise xisbigaa ku biiray aragtida Prof. Axmed?
Jawaabta waxa sheegi doona wakhtiga oo intii gaadhaa ogaan doonto in Prof. Axmed I. Samatar Kulmiye ku biiray iyo in kale.
Xusuus: C/laahi Maxamed Cali waa saxafi ka faalooda arimaha siyaasada iyo xisbiyada Somaliland, waanu ka madaxbanaan yahay aragiyaha xisbiyeysan.